चन्द्रागिरी हिल्सको आइपीओ निष्कासन, कत्ति लगानी गर्ने ? : Himali Khabar
चन्द्रागिरी हिल्सको आइपीओ निष्कासन, कत्ति लगानी गर्ने ?
काठमाडौं, २४ पौस । चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडले दोस्रो चरणमा सर्वसाधारणका लागि शुक्रवार (पुस २४ गते) बाट १५ करोड ३४ लाख ९ हजार १०० रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्कासन गरेको छ ।
कम्पनीले १०० रुपैयाँ अंकित दरका १५ लाख ३४ हजार ०९१ कित्ता सेयरको सार्वजनिक निष्कासन गरेको हो । कुल कित्तामध्ये ४ प्रतिशतले हुन आउने ६१ हजार ३६४ कित्ता सेयर कर्मचारीका लागि सुरक्षित गरिएको छ भने ५ प्रतिशतले हुन आउने ७६ हजार ७०५ कित्ता सेयर सामूहिक लगानी कोषमा बाँडफाँट गरिएको छ । बाँकी १३ लाख ९६ हजार २२ कित्तामा सर्वसाधारणले आवेदन दिन पाउनेछन् ।
कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट गत मंसिर ३ गते चुक्तापुँजीको १२ प्रतिशतले हुन आउने १८ लाख ४० हजार ९१० कित्ता आईपीओ निष्कासनको अनुमति पाएको थियो । पहिलो चरणमा कम्पनीले २ प्रतिशतले हुन आउने ३ लाख ६ हजार ८१९ कित्ता आयोजना प्रभावितका लागि निष्कासन गरिसकेको छ ।
दोस्रो चरणमा भने कम्पनीले चुक्तापुँजीको १० प्रतिशतले हुन आउने रकमबराबरको आईपीओ निष्कासन गरेको हो । यो आईपीओमा लगानीकर्ताले न्यूनतम १० कित्ता र अधिकतम १३ हजार ९६० कित्ताका लागि आवेदन दिन पाउनेछन् । धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा ग्लोबल आईएमई क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ ।
जनरल इन्स्योरेन्सको आइपीओ असोज ११ देखि निष्काशन गर्ने
प्रभु लाइफको आइपीओ विक्री खुला, १० देखि ५ हजार…
रिलायन्सको आईपीओ भदौ ४ देखि बिक्री खुला, भदौ ८ सम्म…
सानिमा जनरलको आईपीओ असोज २१ देखि आउँदै
प्रभु लाईफ इन्स्योरेन्सको आईपीओ बाँडफाँड, आधा…
जनरल इन्स्योरेन्सको आईपीओ बाँडफाँड, कसलाई कत्ति पर्यो ?